IINGXOWA EZILI-10 EZILUNGILEYO KAKHULU NGO-2021 - IZIXHOBO
Iingxowa ezili-10 zeTactical Best ngo-2021
Mhlawumbi ufuna ipakethi esemgangathweni ukuze ugcine iimpahla zakho kunye neelaptop zikhuselekile kwaye zomile endleleni yakho ukubamba uloliwe, okanye mhlawumbi ufuna ibug ngaphandle kwebhegi ngemini ekufuneka uye kuyo yonke iSurvivorman. Nokuba yeyiphi na indlela, ukubaluleka kobhaka wobugcisa owenziwe kakuhle akunakuphikwa.
Kwakukho ixesha kwakungekho kudala kakhulu xa iingxowa zobuchule zazingafane zisetyenziswe ngumntu ongaphandle komkhosi kunye noqeqesho lokunyanzeliswa komthetho. Kodwa kwezi ntsuku, ziya zixhaphake ngakumbi ukulungiselela ukulungela okungxamisekileyo kunye nokuphatha kwemihla ngemihla.
Unoko engqondweni, ukuba ujonge ibhegi elungileyo, mhlawumbi uyazi ukuba ayizizo zonke umgangatho ofanayo. Zininzi iibhegi ezingabizi ngaphandle phaya ezizama ukuzigqithisa njengeengxowa zobuchule.
Kuyanceda ukuphelisa bonke obo bubhanxa ukuze ukhethe kwezona zilungileyo. Ezi zezona zibhegi ziphakamileyo ze-2021.
1. 5.11 Iqhinga RUSH72 Ubhaka woMkhosi
I-5.11 yenza ezinye zeengxowa ezifanelekileyo kwiimarike namhlanje. Yeyiphi oyikhethayo ixhomekeke kwiimfuno zakho ezithile, kodwa kwimali yam, ayibi bhetele kakhulu kune-5.11 Tactical RUSH72 Military Backpack.
Irhabaxa, inokuthenjwa, kwaye inendawo ebanzi ye-55L, le yipakethi enkulu yeziganeko zangaphandle. Ikwenza ibug efanelekileyo ibhegi onokuthi uyipakishe ngayo yonke imeko yakho engxamisekileyo / yokuphila.
Ingxowa ye-Tactical RUSH72 yenziwe nge-Nylon ye-1050D engenamanzi kwaye ine-front MOLLE yewebhu engaphambili kunye necala. Umphambili ojikelezwe kabini kunye namagumbi aphambili kunye negumbi lokubuyisa elingasemva libonelela ngendawo efikeleleka ngokulula.
Ipakethi iza ngemibala eliqela, kubandakanya i-camo kunye ne-tan yasentlango, kunye grey kunye nomnyama ukuba ukhetha into engacacanga ngakumbi. Ngokubanzi le yingxowa enkulu elungele ngokulinganayo ukusetyenziswa kweqhinga kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
2. I-Eberlestock Halftrack Pack
I-Eberlestock Halftrack Backpack yipakethi eyomeleleyo, erhabaxa-nethambekayo eya kukunika ixesha lokuyisebenzisa. Umthamo wayo ungaphezulu nje kwe-35L, eyenza ukuba ilungele ipakethi yeentsuku ezintathu.
IHalftrack ine-MOLLE-style Padlock webbing ngaphakathi nangaphandle, kunye neepokotho ezininzi zangaphakathi ezinobungakanani obahlukeneyo. Yipakethi enkulu kuye nawuphina umntu othanda zonke iziqwenga zegiya ukuba zibekwe endaweni yakhe kunokuphoswa kunye kwigumbi elinye elikhulu.
Ipakethi inesakhelo seGossamer polycarbonate esenza ukuba ilula ngakumbi kwaye inefoyile enqamleza i-airmesh foam yokuthuthuzela kunye nokungenisa umoya. Kuza nesikhuselo semvula esincinci esipakisha kwisingxobo esisezantsi.
IHalftrack yenye yeepakethi ezaziwa kakhulu kulungelelwaniso luka-Eberlesock, kwaye ngokungathandabuzekiyo zezona zininzi kakhulu. Ukuba ujonge into enkulu nebadder, jonga i-Eberlestock F4 Terminator Pack.
3. IPack yeRed Rock yangaphandle yokuhlaselwa kweGiya
Uninzi lweepakethi zohlahlo-lwabiwo mali ziziva ziluhlaza kwaye zenziwe ngexabiso lokusika. Akunjalo ngePakethe yokuhlaselwa evela kwiRed Rock yangaphandle yeGiya. Yenziwe nge-polyester eyomeleleyo engama-600D, enemitya egxunyekweyo kunye nesiphatho sokuqinisa esomeleleyo.
I-Red Rock Outdoor Assault Pack inoyilo olucingisisiweyo nolucingisisiweyo. Inegumbi eliphangaleleyo eliphambili elinoyilo lwe-clamshell, kunye neepokotho ezimbini zangaphandle zokufikelela ngokukhawuleza kwizinto eziyimfuneko.
Intuthuzelo ibalulekile nayo, ewe, kwaye le pakethi ihleli kakuhle emagxeni kwaye iziva ilungelekile. Iphaneli yangasemva inomoya kakuhle. Ngokubanzi, le yingxowa eqinileyo yeentsuku ezimbini.
Le pakethi inobungakanani be-28L, eyoneleyo kwabanye abantu, engonelanga ngokwaneleyo kwabanye. IRock Rock nayo yenza ingxelo engama-35L ukuba ufuna ukukala. Zombini iipakethe zinzima ukubetha kuluhlu lwamaxabiso.
4. Imfihlakalo yokurhweba ngeentsuku ezi-2 zokuhlaselwa
I-Mystery Ranch yenza ezinye izinto ezijikeleze iipakethi eziqinileyo ezinobungakanani obahlukeneyo. Ngomthamo we-27L, i-2-Day Assault Pack lukhetho olukhulu kwisikhwama segciwane. Inesithuba esaneleyo sazo zonke izinto eziyimfuneko ngaphandle komngcipheko wokupakisha ngaphezulu.
Enye yezinto ezintle apha kukutyikitya kwe-3-zip ye-Mystery Ranch, ekunika ukufikelela okukhawulezayo nokungafakwanga kuyo yonke imixholo yegumbi eliphambili. Umkhono wekhompyuter welaptop uyinxalenye yoyilo.
I-2-Day Assault Pack ikwabandakanya i-MOLLE webbing, imitya yoxinzelelo lwangaphambili, iipokotho zebhotile yamanzi, kunye neharness ehlengahlengiswayo. Kukulungele ukuthunyelwa kwamacebo kunye nokuzonwabisa kwasezidolophini ngokufanayo.
5. Ikhondoritha yesi-3 yokuhlaselwa kwempahla
I-Condor ye-3-Day Assault Pack yingxowa eyakhelweyo ukuba idlule kwezinye izinto ezinzima. Le nto ibonelela ngokusetyenziswa kokugqibela, ukusuka kwiipokhethi ezihambelana nesinyibilikisi esinyibilikayo ukuya kwiiringi ze-D kwirholithi yegxalaba lokuncamathela kwezixhobo.
Ipakethi inetoni yokhetho lokugcina, kubandakanya indawo ezimbini eziphambili zokugcina kunye neepokotho zokuhlela, iipakethe ezimbini zecala, kunye neebhegi zangaphandle ezininzi. Lilonke, ineepokotho ezisixhenxe ezine-50L yendawo yonke.
Iyahlaziya nayo. I-Condor ye-3-Day Assault Pack inepaneli yentsimbi egobileyo, imixokelelwane egxeni yomzimba, kunye nebhanti yesinqe eshenxisiweyo. Yenza ibug enkulu ibhegi kwaye ilungele ukhenketho lweeyure ezingama-72.
Bona ngakumbi malunga - Iintente ezili-10 ezilungileyo kakhulu zokukhempisha ngo-2021
6. Intshukumo ngqo yeQanda leQanda leQanda
Ipakethi ehlaselayo kunye nobunzima beentsuku ezimbini zokuhlaselwa, iNgxowa ngqo yeQanda leQanda leQokobhe lenzelwe ezomkhosi kunye nokuthotyelwa komthetho kodwa isebenza ngokulinganayo kwiihambo zangaphandle kunye nokuphathwa kwemihla ngemihla.
Le pakethi inomthamo wama-25L kwaye ibandakanya izinto zokugcina ezipholileyo kakhulu, kubandakanya abaququzeleli bangaphakathi kwipokotho ephambili efanelekileyo izixhobo, i-elektroniki, kunye nezinye izinto eziyimfuneko. Ikwanayo ne-MOLLE kunye ne-daisy chain webbing ngaphandle.
Iqokobhe langaphandle leQanda leQoka ngamaqhosha angama-500D Cordura anento yokugalela amanzi. Yipakethi ebalaseleyo yobuncinci enesixa esimangalisayo sokusebenziseka. Ukukhululwa okukhawulezileyo imitya yamagxa kukwakuchukumiseka okuhle.
7. Ingozi 4 Isicwangciso-C sePakethe yoSuku oluBini oluMiselweyo
I-Hazard 4 Plan-C Dual Strap Day Pack ineprofayili encinci eyenza kube lula ukuyigcina, kunye neepokotho ezininzi onokuzifaka ngazo zonke iintlobo zegiya. Yenziwe ngeNylon Cordura egutyungelwe ngamanzi e-100%.
Olu luguqulelo olunemitya emibini yesiCwangciso-B, ipakethe yesitayile sling yesi-4. Inika uyilo olufanayo oluyingqayizivele, kodwa imitya emibini isasaza ubunzima ngokulinganayo emagxeni akho, isenza ukuba kulunge ngakumbi ukusetyenziswa kobuchule.
Isicwangciso-C siQinisekile kwaye sinomthamo omalunga ne-12.5L, siyenza ukuba ibe yipakethi yosuku olugqibeleleyo okanye ibhegi eqinileyo ngaphandle kokuba ufuna ukupakisha ukukhanya. Ilungele into eyiyo, kodwa ungacingi ngayo njengepakethi onokuhlala kuyo iveki.
8. IBlackhawk Iintsuku ezi-3 zokuhlaselwa
I-3-Day Assault Pack evela eBlackhawk inoyilo olulula olunika intuthuzelo kunye nokusebenza. Inomthamo wama-37L, kwaye umphandle ugutyungelwe kwi-S.T.R.I.K.E. iwebhu yokuncamathisela naliphi na inani lezincedisi.
Ngaphandle kokungathandabuzeki yenye yeepakethi ezinobuchule ezizinzileyo esizibonileyo. Yenziwe nge-Nylon ye-1,000D ngokudibanisa okuqinisiweyo ukumelana nobunzima bokusetyenziswa rhoqo kunye neemeko ezinzima.
I-Blackhawk ye-3-Day Assault Backpack lukhetho olukhulu ukuba ufuna into engazichaziyo njengepakethi yeqhinga. Kububulumko kwaye kuphantsi, kodwa xa ufuna ibhegi enkulu yokuphuma, le ingaphezulu komsebenzi.
9. IGoRuck GR3
Ibanzi, irhabaxa, kwaye iyaqhelana nobubanzi beemeko, ibhegi yeGoruck GR3 iluncedo xa usendleleni. Inezibambo ezijijelweyo kunye nemitya, ke unokuyinxiba emqolo okanye uyiphathe njengengxowa ye-duffel-nokuba ukhetha yiphi na.
Inemiqolo emibini ye-MOLLE ngaphambili kunye neminye emibini emazantsi. Umqolo ongezantsi uyahambelana ne-GR3 Tough Bag yokugcina ibhegi yokulala. Imicu ucinezelo ukugcina ipakethe elungeleleneyo kwaye izinzile.
Olu lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ibhegi yeqhinga lokuhamba ngomoya. Umthamo wayo wama-45L wenza ukuba iGoruck G3 ibe yeyona inkulu ekuvumelekile ukuba iqhubeke. Ikwanomkhono weLaptop owomeleleyo ngaphakathi.
10. UMaxpedition Falcon II Ubhaka
I-Maxpedition Falcon II yipakethe yokutrima kwi-23L, kodwa unokupakisha izixhobo ezininzi kwindawo yayo eyilelwe kakuhle. Yenye yezona zinto zinzima kwaye zinamanzi aqinileyo onokufumana nazo.
Ipakethi yenziwe nge-1050-Denier yamanzi kunye ne-lingrasion enganyangekiyo yelighty ye-nylon yelaphu, egutyungelwe kathathu nge-polyurethane sealant yokuxhathisa okungaphezulu kwamanzi. Ine-YKK yamandla aphakamileyo amandla kunye neparacord zipper pulls, kwaye onke amanqaku ayo oxinzelelo athungiwe kabini.
I-Falcon II ikonwabile ukunxiba nokuba ungazalisa ubunzima obungakanani, ngenxa yemixwayo egxunyekwe emagxeni kunye nokuqina kwe-sternum kunye nenkxaso esinqeni. Iza ngemibala emihlanu, ukusuka kwi-Wolf Grey ukuya kwi-Green Green.
Bona ngakumbi malunga - Ezona 8 zeemela zokuzingela ezilungileyo ngowama-2021
Ii-FAQ zeTactical Bag
Yintoni ibhegi yeqhinga?
Oobhaka beqhinga benziwe bomelele ngakumbi kunepakethi eziqhelekileyo. Zihlala ziyilelwe ukusetyenziswa komkhosi okanye ukusetyenziswa komthetho kwaye zenzelwe ukumelana nobunzima bemisebenzi ephezulu.
wavuka umvambo egxalabeni elingasemva
Zikwasetyenziswa ngabanye ukuhamba umgama omde, ukuthwala yonke imihla izixhobo ezibuthathaka, okanye njengengxowamali engxamisekileyo yokuphuma kwiingxowa.
Zeziphi izinto ezibalulekileyo xa uthenga ibhegi yeqhinga?
Owona mgangatho ubalulekileyo wengxowa yeqhinga kukuba wenziwe ngokuzinzileyo. Jonga izinto ezinje ngokuthunga kabini, ii-seams eziqinisiweyo, kunye ne-zippers zomsebenzi onzima. Uninzi lweepakethi zobuchwephesha ezisemgangathweni zibonelela ngenqanaba elithile lokumelana namanzi, kwaye uninzi lubandakanya amagumbi okugcina akhethekileyo e-hydration bladders kunye nezixhobo ezahlukeneyo kunye nezixhobo.
Ezinye iipakethi zobuqili zijongeka kakhulu njengeepakethe zomkhosi, ngelixa ezinye zingabonakali zahlukile kubhaka oqhelekileyo ngaphandle. Iipakethe zetactical zihlala zinomthamo phakathi kwe-25L kunye ne-50L.
Zeziphi izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzigcine engxoweni yeqhinga?
Into oyifaka kwipakethi yobuchule ixhomekeke kwiimfuno zakho. Abanye abantu bazisebenzisela ukuphatha i-laptop kunye nezinto eziyimfuneko zemihla ngemihla okanye ukuzipakisha ngezixhobo zokuhamba uhambo lweempelaveki.
Kodwa iipakethe ezinobuchule zilungele ukusetyenziswa njengezikhonkwane okanye iibhegi zikaxakeka ezizaliswe kukuphila. Ingxowa yakho ebug ngaphandle ingabandakanya ikiti yokuqalisa umlilo, amanzi kunye nemilinganiselo yokutya, isibane, unomathotholo ongxamisekileyo kunye neebhetri, uncedo lokuqala kunye nogutyulo lwelindle, izinto ezimbalwa zempahla, iikopi zokuzazisa kunye namanye amaxwebhu abalulekileyo.
Ufanele uhlawule malini ngengxowa yeqhinga?
Ixabiso lengxowa yeqhinga lihlala libonisa umgangatho wayo. Oko kuthethiweyo, kukho ukhetho oluqinisekileyo lokulingana naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali, kubandakanya iipakethi zenqanaba lokungena ezilungileyo ezingaphantsi kwe- $ 100. Chitha imali ngokulinganayo kusetyenziso olindele ukuba luphume kwipakethi yakho.
Uyilo lwe tattoo kumadoda abuyileyo
st michael isiphatha ngelosi enkulu
I-ray iyayekisa i-justin vs indlela yokuhamba
Ndilibale nottoos zeentyatyambo